Company Profile - Zhejiang Aijiren Teknolojia Co., Ltd
1-4mL Autosampler lovia Fa HPLC, UPLC, GC
16mm, 25mm Test Tube rano Analysis lamoria, FTU
6-20mL GC HEADSPACE lovia fito feno
8-60mL EPA Storage lovia fito feno
Fonosana sy ny Delivery
Niorina tamin'ny 2007
Zhejiang Aijiren Teknolojia, Inc no mpamatsy ny fiainana eran--siansa, simia, laboratoara consumables, sns Ny vokatra lehibe no avo ranon-javatra fampisehoana chromatography & entona chromatography consumables toy ny Chromatography Autosampler lovia fito feno amin'ny fanidiana, Manisika, crimper sy syringe sivana, sns; Water fanadihadiana consumables lamoria toy ny fantsona fitiliana.
Zhejiang Aijiren Technology, Inc. no manome ny firenena 70 mahery, manarona mihoatra ny 2000 mpanjifa manerana izao tontolo izao. 120 mpiasa, mpianatra 100.000 fanadiovana efitra, ISO, GMP & Bureau Veritas certificated, izany foana no fomba avo lenta sy ny vidin-javatra ho an'ny tia mifaninana eran-sarobidy mpanjifa.
Ny orinasa kolontsaina "Quality aloha, ary Asehoy izay marina." hampiroborobo ny Aijiren hifindra nifoha maraina, ary koa manohana ny Aijiren hiara-miasa sy ny raharaham-barotra innovation.It no fanoloran-tena, izay nampanantena ny hanome vokatra avo lenta sy tsara asa fanompoana ho an'ny mpanjifa. "Vokatra vaovao fampivelarana hatrany hanome fahafaham-po ny zavatra ilain'ny mpampiasa" no tanjona farany. Ny orinasa dia vonona ny hijery ny tsena midadasika ao Shina sy ireo firenena vahiny, ka mitady marimaritra fampandrosoana ao amin'ny sehatry ny asa vaovao. 70 isan-jato ny vokatra no mpivaro-bary tamin'ny Eoropa sy Etazonia gasket tsena. Amin'ny alalan'ny mihoatra ny folo taona ny fampandrosoana sy ny ezaka, fifanakalozana sy miara-miasa amin'ny sampan-draharaha maro ny teknolojia siansa ao an-trano sy any ivelany, dia lasa soa aman-tsara isan-karazany ny lovia manokana autosampler ampiasaina amin'ny laboratoara sy ny orinasa fanadihadiana. Afaka manome Tailor-nanao laboratoara consumables vokatra manara-penitra ny mpanjifa manerana izao tontolo izao, izay mety hanampy anao handresy zava-tsarotra mialoha rehefa manao fanandramana any amin'ny laboratoara.
dia ny finoana sy ny asa nanirahana Aijiren, ka izany no fototry ny fampandrosoana.
Tongasoa eto amin'ny hitsidika sy hiara-miasa!
No.3 Qusheng Rd, Nianli Town, Quzhou, Zhejiang, Sina